Fitokanana ny trano koltoraly malagasy - Instant Malagasy
Fitokanana ny trano koltoraly malagasy
Par Parfait Partout dans Vaovan'ny kolontsaina le 20 Novembre 2013 à 16:18
Ny 15 novambra 2013 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny "Trano Koltoraly Malagasy" eny Ikianja Ambohimangakely. Hampahalala hatrany ny harentsaina sy ny mampiavaka ny kolontsaina malagasy no tanjony araka ny fanazavana nomen'I Victorio Randriamihanta tompon'andraikitra ao amin'ity trano koltoraly vaovao ity.
Tamin'ny 15 novambra 2013 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny "Trano Koltoraly Malagasy". Sehatra iray lehibe ahafahan'ny besinimaro manao fikarohana sy fandalinana ny kolontsaina malagasy sy ny kolontsaina maneran-tany ity nosokafana ity. Misokatra ho an'ny daholobe araka izany ny "Trano Koltoraly Malagasy". Isan'ny tena andrasana hitsidika sy hampiasa ity trano koltoraly malagasy vaovao ity ireo: mpikabary, mpianatra manao fikarohana, mpampianatra ary ny fianakaviana izay te-hahalala na te-hanatanteraka fomba malagasy toy ny famadihan-drazana, ny fanambadiana malagasy sns).
Misy toerana natokana hanatanterahana velan-kevitra io trano kolotoraly malagasy io ary efa misy ihany koa ny toerana natao handraisana ireo rehetra liana hanao fikarohana. Efa misy olona voatokana ihany koa hitari-dalana ny tsirairay amin'ny fikarohana sy fandalinana izay hataony.
Voka-pikarohana maro no hita ao amin'izany "Trano Koltoraly Malagasy" izany, voka-pikarohana izay nangonina nandritra ny 65 nisian'ny Trano Koltoraly Malagasy raha araka ny nambaran'ny mpandrindra nasionalin'ny Trano koltoraly malagasy Victorio Randriamihanta.
« 'NDAO HIARA- HIENTANA E!Ho an'Fo »
Instant Malagasy - Créer mon blog gratuit avec Eklablog - CGU - Signaler un abus -